Magetsi Type Vagadziri & Vatengesi - China Magetsi Type Fekitori
Izvo zvinotungamira zvigadzirwa zvekambani yedu ndeye TS akateedzana mashandiro emakanika ekushandisa matafura, TD akateedzana emagetsi mashandiro matafura, DD akateedzana akawanda-magirazi, maratidziro akazara anoshanda marambi, LED akateedzana marambi anoshanda, meganiki nemagetsi, hydraulic multifunctional tafura yekushanda, gynecological mubhedha uye bvunzo yekuongorora , pendant yezvokurapa, ICU yekuchengetedza zvakanyanya unit kuyimiswa zambuko uye zvimwe zvekurapa zvekushandisa.
TS-D-100 Kaviri Magetsi Kurapa Gasi Pendant yeO ...
TS-DQ-100 Kaviri Ruoko Magetsi Mushonga Endoscopic P ...
TD-TS-100 Fekitori Yakajeka Inopa Chiremba Yakabatana P ...
TS-D-100 Kaviri Magetsi Kurapa Gasi Pendant yeOperation Kamuri
TS-D-100 inoreva ruviri ruoko rwemagetsi gasi pendant.
Kusimudza kwependende kunotyairwa nemagetsi, ayo anokurumidza, akachengeteka uye akavimbika.
Nekamuri inotenderera yakapetwa kaviri, iyo nhanho yekufamba yakakura. Ichave nekuwana kuri nani kumurwere.
Kureba kweruoko rinotenderera uye nzvimbo dzegasi, zvigadziko zvemagetsi zvakagadzirwa zviripo.
Wedzera chiutsi gasi uye nitrogen oxide interface, iyo inogona kukwidziridzwa kune anesthesia yekurapa pendant.
TS-DQ-100 Kaviri Ruoko Magetsi Mushonga Endoscopic Pendant kubva kuFekitori
TS-DQ-100 inoreva ruoko ruviri rwemagetsi endoscopic pendant. Icho chinhu chakakosha mukuvhiya kweLaparoscopic. Inotyairwa nemagetsi, iri nyore uye nekukurumidza. Kwete chete inogona kuendesa magetsi uye gasi, asi zvakare isa mimwe yekurapa michina. 100% gadzirisa muhukuru, zvekurapa gasi zvitoro, uye magetsi zvigadziko. Modular dhizaini, inogona kukwidziridzwa mune ramangwana.
TD-Q-100 Imwe Ruoko Magetsi Kuvhiya Endoscopic Pendant yeOperation Theatre
TD-DQ-100 inoreva kune imwechete ruoko magetsi ekuvhiya endoscopic pendant. Iyi endoscopic pendant inogona kukwira nekudzika nemagetsi anotyairwa system. Inoshandiswa zvakanyanya mukamuri yekuvhiya, yekukurumidzira kamuri, ICU uye yekudyira imba. Inonyanya kushandiswa kuendesa magetsi, kutapurirana gasi uye kutapurirana data, uye nekuisa zvekurapa.
TD-D-100 Imwe Yemagetsi Kuvhiya Gasi Pendant ine CE Zvitupa
TD-D-100 inoreva kune imwechete ruoko magetsi ekuvhiya gasi pendant.
Inoshandiswa zvakanyanya mukamuri yekushandisa uye ICU. Kusimudza kwependende kunotyairwa nemota, iyo isiri yekukurumidza uye inoshanda chete, asi zvakare yakachengeteka uye yakavimbika.
Iyo yakagadzirirwa ese anodikanwa emagetsi, data uye ekurapa gasi masevhisi.